एयरपोर्ट अध्यागमनको नयाँ नियम – अब विदेशबाट फर्किदा यी सामानमा ल्याउदा भन्सार लाग्ने ! – Online Khabar 24
विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ भने यो जानकारी तपाइको लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तपाईले विदेशबाट ल्याउने कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन । को’रोना संक्र’मण पछि हाल नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सबै उडान खुल्ला गरिसकेको छ ।
उदाहरण:- मानौं तपाइले १०० ग्राम काँचो सुन लिएर नेपाल आउनु भयो भने तपाइले तिर्नुपर्ने कर पहिलो ५० ग्राममा माथिको नियम लागु हुन्छ । ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउँदा तपाइँलाई कुल २६,०००/- कर लाग्छ । त्यसपछि प्रति १० ग्राम ६२०० रुपैयाँ लाग्छ ।
नियम अनुसार अब १०० ग्राम सुनको ५ x ६२०० = ३१,०००/- रुपैयाँ पर्छ । यसको मतलब अब पहिलो ५० ग्रामको मूल्य २६,०००/- र अर्को ५० ग्रामको मूल्य ३१,०००/- पर्दा अब कुल १०० ग्राम सुन ल्याउँदा ५७,०००/- कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । (पहिलो ५० ग्रामको २६,०००/- मा दोश्रो ५० ग्रामको ३१,००० जोडदा तपाईंले १०० ग्राम काँचो सुनको कर नेपाली रुपैयाँ ‍५७,०००/- रुपैयाँ महसूल तिर्नु परेको हो ।)
Prevजिउँदो खसीबोकाको खरिद मूल्य निर्धारण, प्रतिकिलो कति ? भाउ सुनेर सबै चकित
nextक च्याक कु’चुक परेको सर्ट आइरन पनि नगरी लगाएर मोदीलाई भेट्न पुग्ने व्यक्ति को हुन् ? सामान्य देखिने यि ब्यक्ती वास्तवमा को हुन ?